November 2018 - Page 20 of 21 -
Maamulka Gobolka Banaadir”Shaqo Kuma Lihin amarka Timaha Looga jaray Dhalinyarada”
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ka hadlay arin dhalinyarada si wayn u hadal hayeen oo ka dhacday Saldhiga Degmada Xamar Jajab ee Gobolka Banaadir. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed C/llaahi Tuulax ayaa sheegay maamulka Gobolka Banaadir inuu baaris ku sameeyay arrin ka dhacday Saldhiga Degmada Xamar jajab oo aheyd in ciidanka timaha ay ka jareen dhalinyaro dhawr ah, balse arrintaasi ay ku dhacday amar shaqsi ah oo aysan aheyn arrin uu ka war haayo Maamulka Gobolka Banaadir, balse si deg deg ah loogu sheegay dadkii fuliyay inay arrintaasi joojiyaan. “Walaalayaal waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay baraha bulshada la isla dhaxmarayay dhalinyaro timaha laga xiirayay oo ay fulinayeen ciidamo ka tirsan amniga waxaan ku sameeenay baaritaan si aan u ogaano inay sax tahay iyo in kale, walaalayaal sawirada la isticmaalayay ee ciidanka timaha ka xiiraya dhalinyarada ma ahan sawiro hada la qaaday balse dhacdada tima jarista waxay dhowr maalmood ka dhacday Saldhiga Xamar jajab, waxaana waydiinay Hay’adaha amniga cidda amartay in dhalinyarada timaha laga xiiro waxaana noo soo baxday inuu amarkaas ahaa [Sii aqri]
Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya Oo Gaaray Magalada Garoowe
November 3, 2018 M.Jo 0
Waxaa magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland Gaaray ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoowe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Nicholas Heysom ayaa la sheegayaa in uu kulan la qaatay Madaxweynaha Maamulka Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo kusoo dhaweeyay aqalka looga arrimiyo maamulkaasi waxa ayna ka wada hadleen sidii loo xalin lahaa qilaafka xoogan ee dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo Maamul Goboleedyada u dhexeeyo. Sidaas si lamid ah waxa ay isla soo hadal qaadeen colaaddda maamulka Puntland iyo Somaliland ku dhexmartay Tukaraq welina ay isku hor fadhiyaan dagaalyahanada labbad dhinac. Ergeyga Qaramada Midoobey iyo Midowga Afrika ayaa todobaadkii hore booqasho ku tagay magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo, halkaasoo ay kula kulmeen Madaxda Jubbaland iyo Koofur Galbeed, sidoo kale waxay Muqdisho kula shireen Madaxweynaha Hirshabeelle. Sidoo kale Nicholas Haysom ayaa sheegay in khilaafka u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada uu caqabad ku yahay Horumarka Soomaaliya.“ Khilaafka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada wuxuu caqabad ku yahay horumarka Soomaaliya iyo dadaalada la doonayo in lagu dhiso dowladnimada Soomaaliya”ayuu yiri Nicholas Haysom.
Wasiir Qarjab:”Ma Aqbali Doono Musharixiin Hub La Soo Galaayo Deganaada Puntland”
Wasiirka warfaafinta Maamulka Puntland Cabdi Cali (Qarjab) oo warbaahinta kula hadlay gudaha Magaalada Garoowe oo ah xarunta maamulkaasi ayaa musharixiinta maaxweynenimo ee Puntland ugu digay in ay hub culus lasoo galaan maamulkaasi. Wasiir Qarjab ayaa sheegay in musharixiinta looga baahanyahay in ay dhowraan xasiloonida Garoowe Iyo Degaanada Puntland ayadoo loo Balansanyahay in doorashada madaxweynaha maamulkaasi lagu qabto sanadka inasoo aadan ee 2019. “Puntland waxay dagaal kula jirtaa Alshabaab iyo Daacish ciidi gacan ka geysan karta waa lasoo dhaweynayaa laakiin marnaba ma aqbali doono in maagalaa dhexdeeda gaadiid dagaal iyo hub culus lagu dhex wado oo magaalada saxmad laga dhigo, musharixii doonaya in uu soo wato ilaaladiisa waa loo ogolyahay laakiin hub culus ma aqbali doono” ayuu sheegay Wasiirka warfaafinta Puntland. Waxaa kale oo uu sheegay in Puntland ay masuul ka tahay amaanka musharixiinta u loolamaya xilka maaxweynaha maamulakasi.
Xildhibaan Prof:Jawaari Oo Ka Soo Muuqday Fadhiga Baarlamaanka is casilaadiisa kaddib
Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) ayaa maanta ka soo muuqday fadhiga Baarlamaanka, isagoo ah Xildhibaan, lix bilood kaddib markii uu iska casilay xilkii Guddoomiyaha Baarlamaanka. Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa soo dhoweeyay Guddoomiye Jawaari oo si lama filaan ah loogu arkay hoolka shirarka Xarunta Golaha Shacabka. Xildhibaan Jawaari ayaa fariistay kuraasta Xildhibaanada, isagoo ugu horeyn iska xaadiriyay buugga diiwaanka Xildhibaanada. Jawaari ayaa muddo 7 sano iyo bilo ahaa Guddoomiyaha Baarlamaanka, isagoo labo jeer isku xigta ku guuleystay xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka. Hase ahaatee mowjado siyaasadeed ay horboodeyso Xukuumadda uu hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa lagu riday, kaddib markii uu is casilay 9-kii bishii April ee sanadkan 2018, xilligaasoo uu Baarlamaanka hareeyay qalalaase ka dhashay mooshin laga keenay.
Guddoomiye Yariisow Iyo Xildhibaan Fiqi Oo Hadalo kulul isku Dhaafsaday baraha bulshada
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa si kulul uga jawaabay hadal ka soo yeeray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Xildhibaan Fiqi ayaa sheegay in shacabka Muqdisho aanay u baahneyn Guulwade, isagoo ula jeeday Guddoomiye Yariisow oo uu ku dhaliilay inuu shaqadiisa gabay. “Guddoomiye Yariisow waa hadlay laakin waddooyinka mugdiga noqday, balliyada biyaha Muqdisho roobabku ku reebeen iyo qashinka Meel kasta yaalla ayaa shaqadoodu u taallaa iyo inuu wax ka yiraahdo, laakin mucaaradka ka hadalkiisa madaxweynaha ayaa Koofurta Sudan fariin uga Soo diray oo ku filan, Mise dhaqanka Guulwadaynta waa lagu qasban yahay,Yariisow hala gaarsiiyo shacabka Muqdisho Guddoomiye ayey u baahan yihiin ee uma baahna Guulwade.”ayuu si kulul u yiri Xildhibaan Fiqi oo ka jawaabayay hadalkii Guddoomiye Yariisow ku weeraray siyaasiyiinta Mucaaradka. Intaas kaddib Guddoomiye Yariisow ayaa qoraal ugu jawaabay Xildhibaan Fiqi, isagoo sheegay in Xildhibaanka aanay aheyn inuu dhibsado ama inuu difaaco waxa uu ugu yeeray qaswadayaasha buun buuniya argagixisada. “Waa nasiibdaro in Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi uu dhibsado ereyada ah yaan la siyaasadeynin amniga iyo inuu difaaco Qaswadayaasha buunbuuniya argagaxisada. [Sii aqri]
Guddiga Doorashada Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed ee 21-kii Oktoobar ay u codeeyeen Baarlamaanka Maamulkaas ayaa maanta soo saaray Habraaca iyo Shuruudaha Doorashada. Waxa ay sheegeen in qof waliba oo hami ugu jiro qabashada Xilka Madaxweynaha in ay ogolaadaan u hogaansanaanta Shuruudaha ay soo bandhigeen. Qofka Musharaxa ah waxaa la dul dhigay Lacag dhan (Labaatan Kun oo Doolar) $20,000, halka Haweenka laga doonayo Bixinta Toban kun oo Doolar ($10,000), da’da Musharaxane aan ka yaraan 40-sano. 13-ka illaa 16-ka Guddiga iyo kormeerayaasha Doorashada ayaa ka kulmi doono Doorashada oo dhici doonto 17-ka Bishaan November sida ku xusan Warqadda Habraaca guddiga.
Xilidhibaan Aaden Barre Ducaale oo ka tirsan barlamaanka dalka Kenya ayaa sheegay in loo baahan yahay in mas’uuliyiinta Soomaaliya ay u midoobaan sidii ay dalkooda uga saari lahaayeen jahawareerka iyo isjiidjiidka siyaasadeed ee muddaba taagnaa. Hadalkiisa ayaa waxa uu imanayaa xilli kala qeybsanaan baahsan ay ka dhex jirto madaxda dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboledyada dalka, kuwaas oo bilihii ugu dambeeyay hawada isu marinayay hadalo ad adag. Waxa uu Yiri “Dhinacba dhinaca kale ayuu ku eedaynayaa inuu hurinayo xiisadda haatan taagan, oo madaxda federaalku waxa ay ku eedaynayaan madaxda maamul goboleedyada in ay faraha kula jiraan siyaasadda arrimaha dibadda halka maamul goboleedyaduna ay ku doodayaan in dowladda dhexe ay ku mashquulsan tahay arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada”. Haddaba xildhibaan Aaden Barre oo ah siyaasi laga soo doorto magaalada Gaarisa ee Waqooyi Bari Kenya, ayaa sheegaya inuu u damqanayo walaalihii Soomaaliya, ayna wanaagsan tahay in madaxda dalkaasi ay u midoobaan danta dalkooda hooyo “Waxaa talo iga ah in madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay heshiiyaan, una daneeyan waqti walbo duruufaha shacabka iyo dalka [Sii aqri]
Amiirka Sucuudigu Wuxuu Sheegay Wariye Khaashuqji uu ahaa Islaami Halis ah
Amiirka dhaxalsuga ah ee waddanka Sucuudi Carabiya, Maxamed bin Salmaan, ayaa waxa uu Mareykanka u sheegay in qoraaga la dilay Jamaal Khaashuqji uu u arkayay inuu ahaa Islaami halis ah, warbaahinta ayaa ku warramaysa. Amiir Maxamed ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu arrintaasi taleefoonka ugu sheegay Aqalka Cad kaddib markii Khaashuqji la waayay taas oo ka horraysay inta uusan Sucuudigu qiran inuu ninkaasi dilay. Sucuudi Carabiya ayaa iska fogaysay wararkaasi lagu daabacay wargeysyada Washington Post iyo New York Times. Khaashuqji, oo ahaa muwaadin Sucuudiga u dhashay kana shaqeynayay warbaahinta Mareykanka, ayaa waxaa si weyn loogu yaqaanay inuu dhaliilo maamulayaasha dalkiisa. Maydkiisa ayaanan weli gacan lagu hayn, hasayeeshee Turkiga, Mareykanka iyo Sucuudi Carabiya ayaa dhammaantood waxa ay isku raaceen in lagu dilay qunsuliyadda Sucuudiga ee Istanbul 2-dii bishii Oktoobar. Sucuudi Carabiya ayaa waxa ay diidday in qoyska boqortooyada uu arrintaasi wax lug ah ku lahaa waxa ayna sheegtay inay “ka go’an tahay inay soo hesho xaqiiqda dhabta ah”. Maxaa lagu sheegay wicitaankii taleefanka? Intii uu socday wadahadalka dhexmaray wiilka uu sodogga u yahay Madaxweyne Donald Trump [Sii aqri]
AKHRIS:Wasiirka Arimaha Gudaha Hirshabelle Oo Xilka Ka Qaaday Duqa Degmada Beledweyne
Wareegto Ka Soo Baxday Xafiiska Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha ee Maamulka HirShabeelle ayaa Waxaa Xilkii looga qaaday Duqii Degmada Baladweyne, Cali Cabdi Qaadir Faarax. Ayadoo uu Maalmahaan Jiray Isqab-qabsi dhinaca siyaada G/hiiraan Si kastaba Ha ahaatee Waxaa dhawaan warbaahinta la hadlay Gudoomiyaha G/hiiraan Yuusuf Dabageed asigoo ka horyimid magacaabista wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle waxaana uu yiri wasiir caadle kama yeelayno in waraaq iska soo qoro uu madax u soo magacaabo magaaladan ee waxaan lenahay haka fiirsado qoraaladiisa,
Madaxweeyne Shariif Xasan Oo Ka Hadlay Caddaadiska Ka Daaran Doorashadda K/Galbeed
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka hadlay Caddaadiska uu wajahayay maalmihii lasoo dhaafay ,taasoo ku aadaneyd in dowladda dhexe ay taageerayso musharaxiinta qaar. Waxaa uu sheegay in ku kalsoon yahay xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed,islamarkaana uu rajo fiican ka qabo in uu markale noqdo Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Xildhibaanada ayuu ka codsaday in ay maanta badbaadiyaan Koonfur Galbeed ,maadaama u sheegay in dowladda dhexe ay ku heyso Caddaadis xooggan oo ka dhan ah. Shariif Xasan ayaa xusay intuu ahaa Madaxweynaha Koonfur Galbeed in u sameeyay waxyaabo badan oo dani ugu jirto Shacabka kunool degaanada maamulka Koonfur Galbeed. Dhinaca kale Shariif Xasan ayaa qarka u saaran in uusan kusoo laaban kursiga Madaxtinimadda Koonfur Galbeed, ka dib markii Magaalada Baydhabo ay tageen Siyaasiyiin taageero ka helaya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwo Shacabku taageersan yihiin. Hase ahaatee Meesha Waxa ka socda ma ahan doorasho ee Waa Dhaqaalo Raadin.